Ukusetshenziswa kwenkukhu ukwenza umsebenzi ekhaya – The Ulwazi Programme
Ukusetshenziswa kwenkukhu ukwenza umsebenzi ekhaya
Imisebenzi inemithelela emikhulu ekuphileni kwabantu nangendlela okuxhunyanwa ngayo nabantu abaphansi ngokwenziwa kwayo imisebenzi. Inkukhu enye yezilwane ezisetshenziswayo ukwenza imisebenzi. Inkukhu isilwane sasekhaya esaziwa ngokuthi sizulazula egcekeni asiyi kude nekhaya. Sinomsebenzi omkhulu uma kwenziwa amasiko okuhlabela abaphansi. Kungaba ukuhlola, ukuvika ibhadi, ukuqinisa noma ukugeza. Lapha inkukhu yenza umsebenzi omkhulu kabi. Kodwa ayivele idunyelwe nje inkukhu njengoba sekwenziwa manje. Ngenxa yokuthi inkukhu isilwane esidla noma yini, kumelwe kwasona sibe into ehlanzekile nelungele ukulethwa ekutheni yenze umsebenzi ngendlela. Futhi inyama yayo idliwa abomndeni. Manje ukuxwaya nokuvika ukudluliseka kukashevu okungenzeka udliwe yinkukhu izulazula, inkukhu ibijahwa ibanjwe. Kuthi uma isibanjiwe bese isiyahlaliswa endlini noma iboshelwe esiqongeni ukuze ingabaleki futhi ingadli noma yini. Ngaso lesisikhathi futhi into eyidlile ngalesisikhathi isakhululekile, izophuma. Uma kunoshevu odlekile, kothi kushaya isikhathi sokuba ihlatshwe, iyobe isihlanzekile.
Inkukhu ivamise ukuba isetshenziswe isayoni noma umthandazi noma uye umhloli. Uma kukhona into ongayiboni kahle neveza izinsolo ezingezinhle, abantu bakithi bake baye kumhloli. Umhloli uzofike abuke esibukweni noma aphonse amathambo, ngesikhathi sokuhlola, ngeke kucace kahle lento ofisa ukuyibona ngenxa yokuthi kukhona okushodayo. Abakini wena osohlola sebeyosho ukuthi kumele uze nenkukhu. Mhla wafika nenkukhu leyo, izofike ihlinzwe kuphume igazi lelo, bese kushiswa impepho. Uma isishisiwe impepho, kuyinxa kukhulunywa nabaphansi becela ukuthi abacacise lento ofisa ukuyibona efika kuwe ngephupho noma ngemicabango ethize. Uyothi uphuma noma esikhathini esingesingakanani emva kokuhlola, leyonto obuyoyihlolela isiyavela. Uma futhi unesinyama uma wenza izinto noma ufuna umsebenzi, uya kwabadala emndenini bese bethi akuhlatshwe inkukhu kushwelezwe kwabaphansi. Koshiswa impepho futhi nalapho bese kubikwa kubona inkinga ekhona ngesikhathi inkukhu ihlatshwa. Ibhadi nebala lisuka lihlale laphaya.